Tena Firaisana ve ny Firaisana Amin’ny Vava? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nanao fanadihadiana tamin’ny tanora 15 taona ka hatramin’ny 19 taona ny Foibe Miady Amin’ny Aretina any Etazonia. Ny antsasany teo ho eo no nilaza fa efa nanao firaisana amin’ny vava. Hoy i Sharlene Azam, mpanoratra an’ilay boky hoe Oral Sex Is the New Goodnight Kiss: “Raha iresahanao [momba ny firaisana amin’ny vava] ny tanora, dia hilaza izy ireo hoe tsy mampaninona ny manao an’izany. Tsy tena firaisana no fiheveran’izy ireo an’ilay izy.”
Ahoana ny hevitrao?
Inona no tena marina?
Nahoana izany no ilaina fantarina?
Valio hoe eny na tsia ireto fanontaniana ireto:
Mety ho bevohoka ve ny ankizivavy iray raha manao firaisana amin’ny vava?
Mety hahazoana aretina ve ny fanaovana firaisana amin’ny vava?
Ampitahao amin’ireto ny valin-teninao:
Valiny: Tsia. Izany no mahatonga ny olona maro hihevitra fa tsy mampaninona ny manao firaisana amin’ny vava. Diso hevitra anefa izy ireo.
Valiny: Eny. Anisan’izany ny angatra, ny aretin-koditra herpesy, ny hepatita (A na B), ny SIDA, ny tety, ary ny votsy eo amin’ny taovam-pananahana.
Valiny: Eny. Firaisana daholo no iantsoana ny fanao rehetra ampiasana ny taovam-pananahan’olon-kafa. Anisan’izany ny firaisana amin’ny vava na amin’ny lava-pitombenana, sy ny fikasikasihana ny filahiana na fivavian’olon-kafa.
Diniho ireto andinin-teny vitsivitsy ireto:
Hoy ny Baiboly: “Izao ny sitrapon’Andriamanitra, dia ny ... hifadianareo ny fijangajangana.”—1 Tesalonianina 4:3.
Manondro ny karazana firaisana rehetra ataon’ny olona tsy mpivady ilay teny tany am-boalohany nadika hoe “fijangajangana.” Anisan’izany ny mikasikasika ny filahiana na fivavian’olon-kafa, sy ny manao firaisana amin’ny vava na amin’ny lava-pitombenana. Tena ho ratsy ny vokany raha mijangajanga ny olona iray. Ny ratsy indrindra amin’izany dia hoe ho simba ny fifandraisany amin’Andriamanitra.—1 Petera 3:12.
Hoy ny Baiboly: ‘Manota amin’ny vatany ihany ny mpijangajanga.’—1 Korintianina 6:18.
Misy vokany ratsy eo amin’ny lafiny ara-batana sy ara-panahy ny firaisana amin’ny vava. Mety hanimba fihetseham-po koa izy io. Hoy ilay boky hoe Talking Sex With Your Kids: “Tsy ny olona manao firaisana mahazatra ihany no mahatsapa ho tsy misy dikany, na manenina, na mahatsiaro ho mora hararaotina. Samy mety hanana fihetseham-po tsy mahafinaritra daholo ny olona manao firaisana tsy ara-dalàna, na inona na inona karazana firaisana ataony. Rehefa firaisana dia firaisana.”
Hoy ny Baiboly: “Izaho Jehovah no Andriamanitrao, Ilay mampianatra anao mba hahitanao soa.”—Isaia 48:17.
Mino ve ianao fa tena mahasoa anao ireo lalàn’Andriamanitra momba ny firaisana? Sa mihevitra ianao hoe maneritery izy ireny? Eritrereto hoe mitondra fiara ianao ary feno takela-by mandrindra ny fifamoivoizana ny lalana andehananao. Maneritery sa miaro no fiheveranao azy ireny? Inona no hitranga raha tsy miraharaha azy ireny ianao sy ny mpamily hafa?
Misakana anao tsy hanao izay tianao ny lalàn’ny fifamoivoizana, nefa miaro anao. Miaro anao koa ny lalàn’Andriamanitra, na dia tsy mamela anao hanao zavatra sasany aza
Toy izany koa ny fitsipik’Andriamanitra. Tsy maintsy hijinja izay afafinao ianao raha tsy miraharaha azy ireny. (Galatianina 6:7) Hoy ilay boky hoe Sex Smart: “Lasa tsy manaja ny tenanao ianao raha miala amin’ny zavatra ninoanao sy ny fitsipika narahinao, ka manao zavatra efa fantatrao fa tsy mety.” Raha mankatò ny fitsipik’Andriamanitra kosa ianao dia ho hita hoe mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ary ny tena zava-dehibe dia hoe tsy henjehin’ny eritreritrao.—1 Petera 3:16.
Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Firaisan’ny Samy Lehilahy na Samy Vehivavy?
Ahoana ny fiheveran’Andriamanitra ny lehilahy miray amin’ny lehilahy na vehivavy miray amin’ny vehivavy? Afaka mampifaly an’Andriamanitra ve izy ireo?
Mahazo Manao Firaisana ve ny Olona Mbola Tsy Mpivady?
Mahazo manao firaisana ve ny olona mbola tsy mpivady, raha ny Baiboly no jerena? Fantaro ato izany.